ओमकार टाइम्स यौन सम्पर्क पछि महिलाले सोच्छन् यी १० कुरा – OMKARTIMES
यौन सम्पर्क पछि महिलाले सोच्छन् यी १० कुरा
एजेन्सी । मानव जीवनका लागि यौन सम्पर्क एक पाटो हो । यो सबैलाई आवश्यक हुन्छ । तर, पुरुष भएकै कारण कसैले आफ्नो जोडीले के सोचिरहेकी छन् भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । महिलाले यौन सम्पर्कपछि के सोच्छन् ?
म उनको लागि ठीक थिएँ ?
यौन सम्पर्कपछि कतिपय महिलाको मनमा आफू आफ्नो जोडीको लागि ठीक थिएँ त भन्ने कुरा पनि मनमा लाग्ने गर्छ । उनी आफूसंगको सम्पर्कबाट आफ्नो जोडी सन्तुष्ट भयो वा भएन भन्ने बारेमा पनि जान्न चाहन्छिन् ।
मैले यो के गरेँ !
यदि कुनै महिला आफ्नो श्रीमान वा ब्वाइफ्रण्डलाई धोका दिएर अन्य कसैसंग यौन सम्बन्ध राख्छिन् भने उनलाई आफूले यो के गरेको भन्ने मनमा खेल्ने गर्छ । उनलाई पछि आफूले यस्तो गर्न नसक्ने सोच्छिन् ।
२०७६ बैशाख १२
कोच भाषाको “बैरागी” कविता संग्रह सार्वजनिक
गौरादह कृषि क्याम्पसमा अध्यनरत बिद्यार्थी बिराज भण्डारीले सृजना गरेको लिफ आर्ट सामाजिक संजालमा भाइरल हुँदै